इरफान खान, जो थिए सजीव अभिनय क्षमताका बेजोड प्रतिभा ! – Nepali Digital Newspaper
नाफाको एक प्रतिशत रकम ‘कोरोना कोष’मा राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि…
भारतले निर्यात रोक्दा व्यापारीले तेब्बर बढाए प्याजको मूल्य
दुर्लभ सुन गोहोरोसहित दुई जना पक्राउ
धादिङमा विद्यालय खुले, एक बेन्चमा दुई विद्यार्थी
इरफान खान, जो थिए सजीव अभिनय क्षमताका बेजोड प्रतिभा !
घटना र विचार, न्युज डेस्क !5months ago May 1, 2020
■ राजन घिमिरे
चरित्रअनुसार अनुहारको भाव प्रस्तुत गर्न सक्ने, वजनदार आवाजयुक्त सम्वाद अनि सजीव चरित्र, आफ्नै प्रकारको साधारण जीवनशैली र समग्रमा भन्नुपर्दा नाटक एवम् सिनेप्रेमी दर्शकमाझ गजबको उपस्थिति दर्शाउन सफल कलाकारको परिचय थियो इरफान खानको । लामो समय आन्द्रासम्बन्धी क्यान्सरका कारण कर्मथलोमा उत्रिन नसकेका यी वलिउड हस्तीले बुधबार (२९ अप्रिल) कहिल्यै नफर्किने यात्रा अर्थात् महाप्रस्थान गरेका छन् ।
उनको अभावमा यतिबेला बलिउड मात्र होइन कि उनलाई मन पराउने विश्वभरिका उनका प्रशंसकहरू भावविह्वल बन्न पुगेका छन् । एक साताअगाडि मात्र आमालाई गुमाएका इरफानले साता दिनपछि नै आफै यो संसारबाट बिदा लिए ।
आफ्नो कलाकारिता यात्रामा यी सर्जकले जति पनि चरित्र भूमिका निभाए, ती कुनैमा पनि नक्कली, नाटकीय या बनावटी लाग्दैन थिए । जीवन्त अभिनयको मामिलामा उनी कहलिएका एक्टर थिए । इरफानको भौतिक शरिर त गयो तर उत्कृष्ट अभिनय र मन छुने कोटीका उनीद्वारा अभिनित चलचित्रहरूले उनलाई सदियौँसम्म हामीमाझ ज्युँदो नै राख्ने छ ।
इमरानको सिनेमा यात्रा सन् १९८८ मा मीरा नायरको ‘सलाम बम्बे’ नामक चलचित्रबाट शुरू भएको थियो । सिनेक्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि टेलिभिजन क्षेत्रमा वाहवाही कमाएका इमरान चन्द्रकान्ता टेलिसिरियलमार्फत दर्शकहरू माझ चिनिएका थिए । पान सिंह तोमर, हिन्दी मिडियम, हासिल, मकवूल, पिकु, बिल्लु, लन्च बक्स लगायतका चलचिहरूमा इरफानले निभाएको भूमिका साँच्चै आज पनि उनका फ्यानहरूका लागि बिर्सने नसक्ने सिनेमा हुन् । बलिउडको सिनेमा बजारमा इरफानको प्रवेशपछि नै हिरोको परिचय फेरिएको थियो । रूप, जिउडाल र खाइलाग्दो शरिरले होइन जीवन्त अभिनयले हिरो बन्न सक्नु पर्छ भन्ने गतिलो उदाहरण पेश गरेका थिए उनले । त्यसैले त नाटकबाट टेलिचलचित्र हुँदै सिनेमामा आएका इरफानको सफलताले उनीपछिको टेलिभिजन र रंगमन्चका कलाकारहरूको मनोबल बढ्नुका साथै ढाडस मिलेको थियो ।
नेपालमा जस्तै बलिउडमा पनि रंगमन्च र टेलिभिजनबाट सिनेमामा आउने कलाकारलाई त्यति सहज रूपमा सिनेमामा प्रवेश पाउन कठिन थियो । तर, इमरानको प्रवेशसँगै यी र यस्ता गलत सोचका पर्खालहरू भत्किएका थिए । ‘अभिनयको कुनै विधा, क्षेत्र र प्लेट फर्म हुँदैन, जहाँ गरे पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने र त्यो भूमिकामा भिजाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । त्यो नै सही कलाकार हो’ – इमरान भन्ने गर्दथे ।
सिनेमा पढेर आएका थोरै भारतीय कलाकारमध्येमा पर्दथे इरफान । त्यसकारण पनि उनि जे बोल्दथे हक्की र निडर भएर बोल्दथे । कुन चरित्र र भूमिका निभाएनन् र उनले ? जे जति निभाए सबै बुलन्द र जीवन्त निभाए, अनि अविष्मरणीय हिरो बन्न पुगे । उनले गुण्डे नामक सिनेमामा बोलेको ‘पेस्तोलकी गोली और लौंडियाकी बोली जब चलती है तो जान दोनों मे ही खतरे मे होती हे’ सम्वाद आज पनि दमदार तरिकाले बोलिने गरिन्छ ।
सिनेमाको सुटिङ स्पटमा गएर त्यहाँको अवस्था हेरेर सम्वादको बारेमा निर्देशकसँग छलफल गर्ने गर्दथे इरफान । यो मामिलामा पनि उनलाई भारतीय सिनेमा निर्देशकहरूले मान्ने गर्दछन् । ठूला-ठूला आँखा अनि झुस्स परेको दाह्री … अभिनयको मामिलामा उच्चतम उपस्थिति । यी र यस्ता अनेकन विशेषताका धनी इरफान खान जस्ता कालजयी कलाकार गुमाउनु पर्दा अभिनयमार्फत विशिष्ट चरित्र र पहिचान प्रस्तुत गर्न सक्ने भूमिका निभाउने कलाकारको अभाव अवश्य हुने छ भारतीय सिनेमा क्षेत्रमा । भारतीय कलाकारिता क्षेत्रमा यो ठूलो क्षति पुगेको छ भने, हामी जस्ता दर्शकले वाह क्या गजबको अभिनय भनेर तारिफ गर्न पाउने यी होनहार सर्जकलाई अल्पायुमै यो संसारबाट बिदा गर्नु परेको छ । इरफान तिमी जहाँ रहे पनि तिम्रो आत्मालाई शान्ति मिलोस् ।
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (७ असोज २०७७ बुधबार, २३ सेप्टेम्बर २०२०)
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ‘आकस्मिक कार्ययोजना’ सार्वजनिक
काङ्ग्रेस नेताद्वारा हिन्दूराष्ट्रको माग